आस्थाको पक्षमा सुनिता, भनिन्– नागरिकले बोल्नै नपाउने हो ? – Khabar Silo
आस्थाको पक्षमा सुनिता, भनिन्– नागरिकले बोल्नै नपाउने हो ?
उनले बोल्न पाउने अधिकार हनन् गर्दै फेरी निरङ्कुशता नै लाद्न खोजेको हो ? प्रश्न गर्दै लेखेकी छिन्, “गल्ति दुबैबाट देखिन्छ दुबैको छानबिन हुन जरूरी छ । सानो तिनो कुरालाई गल्ति पहिल्याई पछि लाग्नुभन्दा ठूलठुला अपराधिक काम गर्नेलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनुस् । छोरी कुटेर बुहारी तह लगाउने काम नगर्नुस् ।”
विहीबार काठमाडौंबाट भद्रपुर जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा आस्था र प्रहरीबीच भएको विवादमा प्रहरीले आस्थाको गल्ती देखाउँदै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । सीसीटीभी फुटेजमा आस्थाको गल्ती देखिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
सुरक्षा जाँचका क्रममा आफूलाई प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठबाट अभद्र ब्यबाहार भएको भन्दै आस्थाले फेसबुकमार्फत श्रब्यदृश्य सामग्री (भिडियो) सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उक्त भिडियोसँगै उनी विवादमा तानिएकी थिइन् ।
झापाका स्थानीय तहमा बिस्फोट गर्ने गरी प्रतिबन्धित नेकपा माओवादी ‘विप्लप’ समूहले माटोमा गाडेर राखेको ठूलो परिमाणको बिस्फोटक पदार्थ झापा प्रहरीले बरामद गरेको छ। अर्जुनधारा१ सिस्ने स्थित एउटा गाईगोठमा माटोमा पुरेर राखिएको उक्त पदार्थ झापा प्रहरीले बरामद गरेको हो।जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार आइतबार राति प्रहरीले बिस्फोटक पदार्थ बरामद गरिएको हो। बीस दिनअघि गाडेर राखेको उक्त […]
काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिएको बताएका छन्।शनिवार रिपोटर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री महासेठले अबको केही महिनापछि सरकारको कामको परिणाम देखिने बताए। जनताले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, उपत्यकाभित्रको सडकका विषयलाई लिएर आक्रोश पोख्ने दिन अब नआउने पनि बताए। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महासेठले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गमा […]
अमेरिका, अफ्रिका र अष्ट्रेलियाको मतगणना सकियो, पन्तभन्दा आचार्य अगाडि
काठमाडौँ । काठमाडौँमा जारी एनआरएनए निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम सार्बजनिक भएको छ । अमेरिका, अफ्रिका र अष्ट्रेलियाको मत परिणाम सार्बजनिक गर्दा बेलायतबाट अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेका कुल आचार्य १८ मतले अगाडि छन् भने जर्मनीबाट उम्मेद्वार बनेका कुमार पन्त पछि पछि छन् । निर्वाचन आयोगले अमेरिका, अफ्रिका र अष्ट्रेलियाको बुथको मतगणना सक्दा आएको परिणाम अनुसार अध्यक्षयका उम्मेद्वार […]
आजको मौसम : काठमाडौंमा बाक्लो हुस्सु, दिउँसोबाट मौसममा क्रमिक सुधार आउने